आइएमई पे मोबाइल वालेटमार्फत गरिने भुक्तानीमा ३० प्रतिशत क्यास ब्याक अफर ,योजना कहिलेसम्म ?
काठमाण्डौ । आइएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ‘आइएमई पे’ ले दसैँको अवसरमा गरिने किनमेललाई ध्यानमा राख्दै आइएमई पे मोबाइल वालेट मार्फत गरिने भुक्तानीमा तीस प्रतिशत क्यास ब्याकको अफर सार्वजनिक गरेको छ । किराना, किनुमन, ठूलो डट कम, काठमाडौं अग्र्यानिक, सोचेको डट कम र नेपमेड्सका आउटडेटेडबाट...
'कामचोर' कर्मचारी तह लगाउने एप, स्क्रीनशट लिने सफ्टवेयरबाट निगरानी
लोरा जोन्स -व्यापार संवाददाता, बीबीसी न्यूज शिबु फिलिप लन्डनस्थित ट्रान्सेन्ड नामक एउटा सानो कम्पनीका संस्थापक हुन्। उनको कम्पनीले थोक विक्रेताबाट सौन्दर्य सामग्री किन्छ र अनलाइनका माध्यमबाट बेच्छ। विगत डेढ वर्षदेखि उनले हबस्टाफ नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कर्मचारीहरूले काम गरेको घण्टा, कओबोर्ड र माउसको चाल र उनीहरूले खोल्ने...
डिसहोममा डिलर दाइको डिस्काउण्ट अफर, डबल मौकादेखि रु. १ लाखसम्म जित्न सकिने
काठमाण्डौ । डिस होमले आफ्ना ग्राहकलाई थप बढी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘डिस होममा डिलर दाईको डिस्काउण्ट अफर’ सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त अफरलाई डिसहोमले वडा दशैंको उपलक्ष्यमा पनि निरन्तरता दिँदै २४ महिना रिचार्जमा डबल धमाका अफर ल्याएको छ । यस अफरमा ग्राहकले डिलर दाईमार्फत फण्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्जभन्दा...
‘सिम टिभीमा ‘फाइदाको आइडिया’ अफर
काठमाण्डौ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल केवल नेटवर्क सिम टिभीले यसपालिको दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ‘सिम टिभी फाइदाको आइडिया’ नामक योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले सिम टिभीको वार्षिक रिचार्जमा नगद छुटका साथै सबैभन्दा सफा पिक्चर क्वालिटी, एक्स्क्लुसिभ नेपाली च्यानलहरु, सबैभन्दा सफा एचडी र एसडी च्यानलहरु रिलायबल...
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स र फेसबुकबीच सहकार्यः देशैभर फ्रि एक्सप्रेस वाईफाई
काठमाण्डौ । फेसबुकको सहकार्यमा वर्ल्डलिंकले ७ हजार ५ सय ठाउँमा फ्रि इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड र फेसबुकबीच नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदान गर्ने सहकार्य भएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड र फेसबुकको सहकार्यमा...
काठमाण्डौ । वैश्विक स्तरमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले समस्त नेपालीे महान चाडहरु बडा दशैँ तथा तिहारको शुभ अवसरमा ‘दशैँ र तिहारको अफर’ एसएमएस क्याम्पेन, विशेष उपहार योजनाको घोषणा गरेको छ । उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ताले क्याम्पेन अवधिभर उत्पादनको आईएमईआई/सीएमईआई/डीसी कोड एसएमएस गरी योजनामा सहभागिता जनाई विभिन्न उपहार जित्ने...
युट्युबका प्रिमियम ग्राहकलाई विशेष सुविधा, मासिक कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाण्डौ । भिडियो सेयर गर्ने युट्युब प्लेटफर्मले नयाँ सुविधा परीक्षण गर्ने नीति ल्याएको जनाएको छ। एक्सडीए–डेभलपर्सका अनुसार परीक्षणका रुपमा यो सुविधा विशिष्ट (प्रिमियम) ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ। केही छानिएका गूगल प्रयोगकर्ताले यी सुविधाहरु परीक्षण गरिसकेको दी भर्जले जनाएको छ। प्रिमियम ग्राहकले युट्युब प्रयोग गर्दा...
राजश्व भुक्तानी अब आइएमई पे डिजिटल वालेटबाट !
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएमई पे बीच सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट संकलन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । बैंकमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र आइएमई पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकाश नाहाटाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि...
फेसबुक नेपाल भित्रियो, वर्ल्डलिंकसँग सहकार्यको घोषणा हुँदै
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको नेपालमा आधिकारिक प्रवेश भएको छ । यसको आधिकारिक घोषणा बिहीबार हुँदैछ । लकडाउनअघिदेखि नै फेसबुक एक परियोजनामार्फत नेपाल भित्रिए पनि त्यसको आधिकारिक घोषणा भर्खरै हुन लागेको हो । फेसबुकले नेपालको अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । वर्ल्डलिंकले फेसबुकसँगको...
स्मार्ट डोकोले ल्यायो दशैं अफर
काठमाण्डौ । दशैंको शुभ अवसरमा स्मार्ट डोको (नेपालको नम्बर १ अनलाइन् मेगास्टोर) ले सेलपेको सहयोगमा “स्मार्ट दशैं अफर” ल्याएको छ । यस अफरबाट स्मार्टडोकोका ग्राहकहरुले हरेक दिन सामसुङ्ग स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउन सक्नेछ । यसका लागि स्मार्ट डोकोमा सेलपेमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनेछ । ग्राहकहरूले बिहान ११ बजेसम्म सामान अर्डर...
नेपालमा ओपो एफ १७ को बिक्री सुरु, कति पर्ला मूल्य?
काठमाण्डौ । नेपालमा आजदेखि ओपो एफ१७ को फस्र्टसेल मार्फत बिक्री खुल्ला भएको छ । सेप्टेम्बर २७ का दिन ओपो एफ १७प्रो, एन्को डब्ल्यू ५१ टीडब्ल्यूएस र ओपो वाट्चेजका साथमा ओपो एफ १७ पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिए तापनि कार्यक्रम मार्फत फोनको फस्र्ट सेल मिति बारे मात्र जानकारी दिइएको थियो । आजदेखि बजारमा उपलब्ध भइरहेको ओपो एफ१७...
भायानेटको चाडपर्व अफर: बडादशैंमा बडा टिभी
काठमाण्डौ । विगत २० वर्षदेखि व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको भायानेटले यस वर्षको आफ्नो चाडपर्वको अफरको रुपमा “भायानेट बडा दशैंमा बडा टिभी” योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीकाअनुसार नेपालीहरुको महान चाँड दशैं र तिहारको उपलक्ष्यमा “भायानेट बडा दशैंमा बडा टिभी” नामक योजनामा ग्राहकहरुलाई...
ओपोद्वारा एफ१७ प्रो सार्वजनिक,मूल्य कति?
काठमाण्डौ । ओपोले आफ्नो नयाँ ह्यान्डसेट ओपो एफ१७ प्रो नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । अल्ट्रा(स्लिक स्मार्टफोन बडीमा फेशनेवल प्रविधि सुसज्जित ओपो एफ१७ प्रोले प्रयोगकर्तालाई प्रिमियम डिजाइन तथा फञ्शनको साथमा उत्कृष्ट एआई पोट्रेट फोटोग्राफी फिचरको अनुभूति दिन्छ । ‘एफ सिरिजको डिजाइन गरिँदा ट्रेण्डसेटिङ पुस्तालाई ध्यानमा राखि...
ट्रम्प प्रशासनलाई झट्का, अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अदालतको आदेश
काठमाण्डौ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा अदालतले रोक लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले टिकटकको नयाँ डाउनलोडमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। जुन प्रतिबन्ध लागू हुन केही घन्टामात्रै बाँकी रहँदा अमेरिकाको वासिंटन अदालतका एक न्यायाधीशले उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्।...
भिभोको 'वाई-२०' नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी भिभोले 'वाइ-२०' नेपाली बजारमा ल्याएको छ । एआइ ट्रिपल म्याक्रो क्यामेरा र ५ हजार एमएएच ब्याट्री क्षमताको यो सेट अनलाइन प्लेटफार्म दराजबाट बिक्री सुरू गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। साइड फिंगर प्रिन्ट, फेस सेन्सर अनलक सुविधासँगै १३ र २-२ मेगापिक्सेलका क्यामेरा रहेको सेटमा एआइ पावर सेभिङ प्रविधि...